नीति तथा योजना आयोगका उपाधयक्ष र सदस्यले लिए सपथ « Janata Samachar
नीति तथा योजना आयोगका उपाधयक्ष र सदस्यले लिए सपथ
प्रकाशित मिति : 13 June, 2018 6:35 pm
हेटौंडा । तीन नम्बर प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यको सपथ ग्रहण भएको छ ।
बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा डाक्टर खिमलाल देवकोटाले आयोगको उपाध्यक्ष र श्याम बस्नेतले सदस्य पदको सपथ लिएका हुन् । डा. देवकोटा र बस्नेतलाई आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले सपथ गराउनुभएको हो । सपथ ग्रहण पश्चात आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भित्रै पदभार सम्हाल्नुभएको छ ।
पदभार ग्रहण गर्दै डा. देवकोटाले सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अवधारणालाई सफल बनाउने किसिमका नीति तथा योजना निर्माणमा सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । केन्द्रिय राजधानी समेत समावेश भएको ३ नम्बर प्रदेशलाई नमूना प्रदेशको रुपमा विकास गर्न, नीति तथा कानुन निर्माण गर्न अबसर संगै चुनौती भएको बताउँदै एक बर्षभित्र देखिने खालको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मँगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले डाक्टर देवकोटालाई आयोगको उपाध्यक्ष तथा श्याम बस्नेतलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । विकास अर्थशास्त्रमा विधावारिधी गरेका देवकोटा वित्तिय संघीयता व्यवस्थापनका विज्ञ मानिन्छन् ।
संघीयता विज्ञ डाक्टर देवकोटाले अर्थशास्त्रमा एमए, आर्थिक विश्लेषणमा एमएसी र विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा लामो समय विज्ञ भई कार्य गरेका डा देवकोटा प्रधानमंत्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि विज्ञ सल्लाहकार भई कार्य गरिसकेका छन ।
काठमाडौ विश्वविद्यालयमा समेत प्राध्यापन गरेका देवकोटा संघीयता र विकास लगायतका विषयमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई वेला वेलामा प्रशिक्षण समेत दिने गरेका छन । यस्तै सदस्यमा नियुक्त बस्नेत प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापन तथा परिचालनको विषयमा विज्ञ हुन् ।